Fungai Machirori focuses on findings from a three-month pilot of Her Zimbabwe, a web-based platform that has encouraged Zimbabwean women to explore, celebrate and articulate the heterogeneity of their lives and identities. The platform has played in an important role in fostering lateral communication between Zimbabwean women in Zimbabwe, and those in the diaspora. It will locate Her Zimbabwe within the dominant discourse of gender and linear definitions of development and empowerment prevalent in the country. Are new media-based initiatives in Zimbabwe elitist? If so, how can such elitism be overcome? Do women who are already "developed" and "empowered" (as the target audience of Her Zimbabwe is thought to be) need their own platforms for articulation, or should the focus be on "grassroots" women?